जंगली जनावरले क्षती पु¥याएमा राहत लिन अग्रसर होऔँ | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
जंगली जनावरले क्षती पु¥याएमा राहत लिन अग्रसर होऔँ
Published On : २८ पुष २०७६, सोमबार ०९:१०
जंगली जनावरले क्षती पु¥याएमा पनि राहत पाईन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ । अब अनौठो नमान्नुहोस् यो अभियान गोरखामा सुरु भईसकेको छ । मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको कार्यालयले जंगली बन्यजन्तुले तपाईले पाल्नु भएको जनावर वा बालीनालीमा कुनै क्षती पु¥यायो भने आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर उजुरी गुर्नहोस क्षतीपूर्ती दिनेछ ।
बाघ, हात्ती, गैडा, भालु, चितुवा, हिउँ चितुवा ब्वाँसो, जंगली कुकुर, बँदेल, अर्ना, मगरगोही, गौरी गाइ र अजिङ्गर जस्ता १४ प्रकारका जनावरले पु¥याएको क्षतीपूर्ती पाईन्छ । गोरखामा चितुवा, जंगली कुकुर बँदेलबाट धेरै क्षती हुने गरेको छ । गत वर्ष आयोजनाको गोरखा स्थित कार्यालयले ४२ जना पिडितलाई जंगली जनावरबाट भएको क्षतीको राहत स्वरुप नौ लाख ३३ हजार बितरण ग¥यो ।
ब्यक्तिगत सम्पत्तीमा क्षती पुगेपछि निराश बनेका सर्वसाधारणलाई क्षतीपूर्ती दिने अभियानले केहीहद सम्म राहत मिलेको छ । यसरी क्षतीपूर्ती दिन थालिएको एक वर्षअघि देखि मात्रै हो । कुन घरपालुवा जनावरको कति क्षती दिने भन्ने पनि उल्लेख छ । गोरखाको उत्तरी भेगका सर्वसाधारण जंगली जनावरबाट धेरै क्षती भोग्न बाध्य छन् । त्यहाँ सम्म पनि आयोजनाले क्षतिपूर्ति दिने विषयमा जानकारी दिनुपर्छ । पशुलाई मात्र होईन ति बन्यजन्तुले मानिसलाई आक्रमण गरेको खण्डमा पनि क्षतिपूर्ति पाईन्छ ।
जंगली जनावरबाट हुने क्षती बापत दिईने क्षतिपूर्तिको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन सकिएन भने आयोजनाले राखेको लक्ष्य पुरा हुँदैन । अधुरो जानकारी प्रचार भयो भने अहिले बाँदरमा आतंकित सर्वसाधारण गुनासो लिएर धाउने क्रम पनि बढ्न सक्छ । यसबारेमा स्थानीय तह मार्फत गाउँगाउँमा प्रचार गर्न सकियो भने सर्वसाधारणले लाभ पाउनेछन् । आयोजनाले राखेको उद्देश्य पुरा गर्न पनि स्थानीय सरकारले सघाउनेछ